Ixesha kunye nabahlobo 22
Umntu unokujonga ngaphakathi emzimbeni wakhe kwaye abone amalungu ahlukeneyo ekusebenzeni kwawo. Oku kwenziwa yimbonakalo yokubonakalayo, kodwa akubonakali okunqamle kwizinto ezibonakalayo. Iliso liqeqeshelwe ukubona izinto ezibonakalayo. Iliso aliyi kubhalisa ukunyibilika ngezantsi okanye ngaphezulu kwe-octave yomzimba, kwaye nengqondo ke ayinakukwazi ukutolika ngobulumko oko iliso lingenakudlulisela kuyo. Kukho imibhobho engezantsi kwe-octave yomzimba, kwaye nabanye ngaphezulu kwayo. Ukurekhoda ezi ntsholongwane iliso kufuneka liqeqeshiwe. Kuyenzeka ukuba uqeqeshe iso ukuze likwazi ukurekhoda izinto ezingabonakaliyo ekubonakaleni kwesiqhelo kodwa indlela eyahlukileyo iyimfuneko ukwenzela ukuba umntu abone ilungu lezinto zomzimba ngaphakathi emzimbeni wakhe. Ubuchwephesha bengaphakathi endaweni yombono bangaphandle bufanele baphuhliswe. Kulowo unganaziphi na i-faculty enjalo kuyafuneka ukuba aqale ngokuphuhlisa i-faculty ye-introspection, eyinkqubo yengqondo. Ngokukhula kokuqonda kuya kuphuhliswa namandla okuhlahlela. Ngolu qeqesho ingqondo iyahlulahlula-hlukana namalungu athe aqwalaselwa. Emva kwexesha, ingqondo iya kukwazi ukukhangela ilungu ngokwengqondo kwaye, ngokubeka inqaku kuyo, yiva ukukhutshwa kwayo. Ukongezwa kwesimo sokuziva ubonwe kukuqonda kwengqondo kwenza ingqondo ibone ngokukuko ngakumbi kwaye iphuhlise umbono wengqondo ngokunxulumene nesitho. Ekuqaleni umzimba awubonakali, njengezinto ezibonakalayo, kodwa yinto yokuqonda kwengqondo. Emva kwexesha, nangona kunjalo, ilungu linokubonwa ngokucacileyo njengayo nayiphi na into ebonakalayo. Isibane esibonwa kuso asisiyongqondo yokukhanya emzimbeni, kodwa kukukhanya okunikelwa yingqondo ngokwayo kwaye iphoselwe kwilungu eliphantsi kovavanyo. Nangona ilungu libonwa kwaye ukusebenza kwalo kuqondwe yingqondo, oku akubonakali ngokwasemzimbeni. Ngalo mbono wangaphakathi izitho zibonwa ngokucacileyo kwaye ziqondwa ngokucokisekileyo ngakumbi kunezinto ezibonakalayo eziqhelekileyo.
Kukho enye indlela yokubona amalungu emzimbeni wakho, okungekho, nangona kunjalo, afike ngexesha lokuqeqeshwa kwengqondo. Le enye indlela yikhosi yokuphuhliswa kwengqondo. Iziswa ngokutshintsha komntu imeko yakhe evela emzimbeni wakhe ukuya kumzimba wengqondo. Xa oku kwenziwe, ukubonwa kwe-astral okanye ye-clairvoyant kuya kusebenza, kwaye kule meko umzimba we-astral uhlala ushiya okomzimba okwethutyana okanye unxibelelene ngokukhululekileyo nawo. Kule meko into ebonakalayo ibonwa kwilungu layo le-astral emzimbeni we-astral njengoko umntu ozijonga esipilini akabuboni ubuso bakhe kodwa ubonakalisa okanye umlinganiso wobuso bakhe. Oku kuya kuthathwa ngendlela yomzekeliso, kuba umzimba womntu we-astral uyilo lomzimba wenyama, kwaye ilungu ngalinye emzimbeni linemodeli yalo ethile ngokweenkcukacha kumzimba we-astral. Yonke intshukumo yomzimba wenyama sisenzo okanye ukusabela okanye ukubonakaliswa komzimba we-astral; imeko yomzimba ebonakalayo ibonakaliswa ngokwenene emzimbeni we-astral. Ke ngoko, umntu unokuma kwimeko ye-clairvoyant ukubona umzimba wakhe we-astral, njengoko ekwimeko yomzimba unokuwubona umzimba wakhe wenyama kwaye kuloo meko uya kuba nakho ukubona onke amalungu ngaphakathi nangaphandle komzimba wakhe, ngenxa yokuba i-facultult ye-astral okanye yinyani umbono we-clairvoyant awumiselwanga ngaphandle kwizinto zezinto njengoko kunjalo ngokwasemzimbeni.
Zininzi iindlela zokukhulisa ubuhlakani, kodwa inye kuphela icetyiswa abafundi be
Le ndlela kukuba ingqondo kufuneka iphuhliswe kuqala. Emva kwengqondo sele ikhulile, ubuhlakani be-clairvoyant buza kuthi, ukuba bunqwenelekayo buye buvele ngokwendalo njengamagqabi omthi entwasahlobo. Ukuba iintyatyambo zinyanzelwa ngaphambi kwexesha lazo elifanelekileyo, iqabaka liya kubabulala, akukho siqhamo silandelayo, kwaye ixesha elininzi umthi uyafa. I-clairvoyant okanye amanye amaqondo obuchwephesha anokufunyanwa ngaphambi kokuba ingqondo ifikelele ekukhuleni kwayo kwaye iyinkosi yomzimba, kodwa ziya kuba nokusetyenziswa okuncinci njengoko kunjalo kwiimvakalelo zesidenge. Isiqingatha esiphuhlisiweyo se-clairvoyant asiyi kuyazi indlela yokusebenzisa ngobuchule, kwaye banokuba yindlela yokudala usizi lwengqondo.
Enye yeendlela ezininzi zokuphuhliswa kwengqondo kukwenza umsebenzi wakho ngovuyo nangokungathobeli. Esi sisiqalo kwaye yiyo yonke into enokwenziwa kuqala. Iya kufunyanwa ukuba iyazanywa, ukuba indlela yekhondo yindlela yokufumana ulwazi. Njengomntu esenza umsebenzi wakhe ufumana ulwazi, kwaye uya kukhululwa kwiimfuno zoloxanduva. Uxanduva ngalunye lukhokelela kuxanduva oluphezulu kwaye yonke imisebenzi yenziwe kakuhle kulwazi.